Goynta goynta jilicsanaanta laser ee dharka jilicsan iyo dharka - Dharka 'Laser Golden'
Jaridda Laser ee Qoraallada Sublimated
Codsiyada Mashiinnada Laydhka ee loo yaqaan 'CO2 Macher Laser' ee loogu talagalay waaxda birta
Goynta goynta jilicsan ee dharka jilicsan ee dharka jilicsan iyo dharka
Maalmahan tiknoolajiyada daabicida waxaa si balaadhan looga isticmaalaa warshado kala duwan sida dharka isboortiga, dharka dabbaasha, dharka, boodhadhka, calanka, iyo calaamadaha jilicsan. Nidaamka daabacaadda sare ee wax soo saar ee maanta ayaa u baahan xitaa xallin xalal degdeg ah. Muxuu yahay xalka ugu fiican ee jarista dharka daabacan iyo dharka? Goynta dhaqameed gacanta ah ama goynta farsamo yaqaanku waxay leedahay xadad badan. Goynta laser-ka ayaa noqota xalka ugu caansan ee loo yaqaan dusha sare ee gogosha dhar-hoosaadka daabacan.
Xalka Jarista Laser Vision-ka
Xalku wuxuu si otomaatig ah u jarayaa geedi socodka jarista qaabdhismeedka dheecaanka dheecaanka leh ee maro ama dhar si dhakhso leh oo sax ah, oo si otomaatig ah u magdhabaya wixii qalloocno ama fiditaan ah ee ku dhaca xasillooni la'aan ama fidsan.
Kamaradaha waxay sawiraan dharka, waxay ogaadaan oo aqoonsadaan dusha daabacan, ama waxay ka qaadaan calaamadaha diiwaangelinta daabacan ka dibna mashiinka laser-ka ayaa jaraya naqshadaha la xushay. Geedi socodka oo dhan si otomaatig ah ayuu u shaqeeyaa.
NIDAAMKA MADAXWEYNAHA EE LUUQADU WAA Labo DHAMMAAN SHAQAALAHA
Nidaamkan aragga wuxuu awood u leeyahay inuu si dhakhso leh u baari karo dharka daabacan oo saaran sariirta goynta wuxuuna si otomaatig ah u abuuraa unug goyn. Looma baahna in la abuuro naqshad gooyn, kaliya u dir wixii naqshad cabbir ah qaab kasta oo soo saar baangado jaban, calamado ama qaybaha dharka oo leh xirmooyin tayo leh oo xidhan.
Nidaamka aqoonsiga kaameeraha waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo calaamadaha diiwaangelinta ee lagu daabacay qalabkaaga. Astaamaha waxaa si sax ah loogu akhrin karaa nidaamkayaga laser-ka iyo booska, cabirka iyo is-beddelka waxyaabaha la daabacay ayaa la magdhabi doonaa iyadoo la raacayo falanqaynta caqliga leh ee calaamadaha diiwaangelinta.
Codsashada Sublimation Jarida Waraaqaha Laydhka Leh ee Laydhka iyo Dharka
Dharka isboortiga iyo dharka daabacan, kabaha kabaha, dharka dharka
Nidaamka goynta 'Laser Goynta' ee Laser wuxuu ku habboon yahay goynta dharka isboortiga gaar ahaan awooddiisa uu u leeyahay inuu yareeyo waxyaabo kala fidsan oo si fudud u qalloocan - sida saxda ah dharka isboortiga (sida dharka baaskiilka, xirxiisyada koox / jaakadaha, dharka dabbaasha, goynta, lebbiska firfircoonaanta iwm.)
Astaan ​​yar, warqad, lambar iyo alaab sax ah
Qalabka goynta laser wuxuu adeegsadaa calaamadaha diiwaangelinta, iyo barnaamijka kumbuyuutarka ee GoldenCAM ee kuyaala goynta laser wuxuu leeyahay howsha magdhowga dhalanteed, kaas oo si otomaatig ah u aqoonsan karo tilmaamaha la isku soo aruuriyay ee ku saabsan alaabada maaddada dhalaalka.
Boodhadhka, calamada, sawirada waaweyn iyo saxiixyada jilicsan
Xalkan laser goynta waxaa si gaar ah loogu talagalay warshadaha daabacaadda dijitaalka ah. Waxay soo bandhigtaa awoodo aan loo wada dhanayn oo loogu talagalay dhammeystirka qaab balaaran oo qaab dijital ah loo daabacay ama lagu sawiray midabbo jilicsan oo suuf ah iyo calaamad jilicsan oo leh cabbir go'an iyo dherer.
MUUQAALKA LUUQADAHA LUUQADAHA EE DHAQANKA EE LAGU SAMEEYAY FARSAMADA LUUQADAHA IYO FARSAMADA
Mashiinka goynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Mashiinka goynta Mashiinka Maskaxda ee Laba-geeska ah ee 'Smart Vision'
Mashiinka Goosashada Laser Kaameeraha
Mashiinka goynta Laascaanoodii Weyn ee Nooca Saxda ah ee Saxiixa jilicsan